Gelatin kophudingi - ikhambi kangcono iholidi yezingane, kanye itiye umndeni evamile. Ngaphezu kwalokho, kuyindlela enhle ukuba izitike yimpango amnandi sibalo ngaphandle ingozi kakhulu. Izinhlobonhlobo kophudingi isethwe. Cabanga ethandwa kakhulu futhi kwafunwa izingane kanye nabantu abadala ukudla.
Qaphela gelatin kophudingi zahlukahlukene kakhulu, umuntu ngamunye uyakwazi ukukhetha omunye ukunambitheka. The main isici isici lesi sidlo - okunama-kilojoule amancane, okuyinto inzuzo ukuncipha futhi labo uyabakhathalela sibalo. Ngaphezu kwalokho, isici esihle kakhulu salokhu uhlobo dessert ukuthi is kuhlangene imikhiqizo eminingi. Kungenzeka ukwengeza zonke ushokoledi, izithelo ezomisiwe, amantongomane noma cottage shizi. Dessert of cottage shizi nge gelatin ukulungiselela elula ngokuphelele. Kulesi sihloko, thina ukuchaza zonke ezicashile le nqubo elula.
Le nguqulo yokuqala
Ubani uzokwenza dessert emithathu egqinsiwe wenza kusukela cottage shizi nge gelatin. Ezithakazelisa kakhulu futhi elula inketho okukhona - jelly multilayer. Akukhona lokho kuphela, it ihlanganisa ezihlukahlukene flavour efanelekayo, kanjalo ubukeka ezithakazelisayo futhi nomqondo kangcono awukudla enempilo ukuze iholide yezingane. Ngakho qala ukupheka izaqheqhe dessert nge gelatin.
90 gr. cherry, umcako, lemon jelly;
150 g ushizi;
ukhilimu 50 g;
ukhilimu ezine wezipuni;
isipuni esisodwa ushukela.
Ukuqala enezingxenye jelly. Lapha, konke silula: 85 amagremu jelly ziyoncibilika e 1 inkomishi amanzi ashisayo, bese uthele endishini ejulile futhi obandayo esiqandisini ihora noma amabili. Ready jelly stratum cool kumele yentiwe cottage shizi soufflé. Lungisa ke kufanele kube ngendlela: cottage shizi, ukhilimu omuncu, isiswebhu ukhilimu noshukela usebenzisa mixer, chaza jelly lime uhlanganise wonke soufflés wathola. Ukuze ungqimba lukhuni kudingeka futhi cishe ihora. Inqubo kufanele liphindwe kuze ungqimba wokugcina jelly. Okunjalo izaqheqhe dessert ekugcineni osemanzi amanye amahora amabili, ngemva kwalokho-ke kungenziwa usike ngabondla zokuhlobisa ophehliwe. Lena simnandi kakhulu ukuphathwa, futhi, naphezu isikhathi esichithwa ekuwulungiseleleni, lilula ukulungiselela.
Uphudingi Dairy nge gelatin - lena awukudla ewusizo kakhulu futhi ezihlwabusayo, futhi okubaluleke kakhulu, nihlelele aphansi. Ukuze silungiselele ezihlukahlukene amnandi kuphela kudingeka gelatin (30 g), ubisi (750 ml) kanye noshukela (100 g). Ukwengeza ukunambitheka isidlo, ungase futhi usebenzise nesinamoni noma ezinye isinongo enongiwe, engeza vanilla noma esikhundleni ubisi ukhilimu futhi ukuhlobisa izithelo. Kukhona ezinye izinketho ukupheka. Ngokwesibonelo, inqubo yokupheka kungenziwa kuhlangene encibilikayo ubisi ikhofi, ushokoledi, ukhokho, noma izithelo ayo. Lezi kophudingi ingalungiswa ngokulandela iziqondiso ku iphakethe of gelatin, nje kudingeka esikhundleni amanzi ubisi. Into ebaluleke kakhulu kulesi isidlo - umusa wakhe. izinto zemvelo eziqinisa ithambo izicubu, equkethwe gelatin, i-calcium ngoba amathambo eqinile - ubisi, ukhokho lisebenza njengesimemo antidepressant, kanye nokusetshenziswa, isibonelo, uju kwenza dessert esikhundleni ushukela evamile ziwusizo ikakhulu phakathi kwabanye.
Uphudingi Dairy nge gelatin etholakala okumnandi ikakhulu uma usebenzisa ubisi lonke inkomo, futhi kungcono uma pasteurized. Ezingemnandi umthunzi zithole jelly, okulungiselelwe ubisi abilayo, ngakho akudingeki ukuba wenze lokho. Skimmed, skimmed futhi uyobanika abangeke bakunambithe okuhle kakhulu uswidi, akudingeki ukuyisebenzisa. Ngaphezu kwalokho, le dessert kungathatha umbala ezimbi bluish. Uma kungekho ubisi ke noma kunjalo, aziphendukeli ukusetshenziswa encibilikayo ezomile, ngeke isidlo ngokuphelele hhayi esihlwabusayo. Kungcono ukupheka ukhilimu omuncu ne gelatin dessert.
Thatha gelatin (ezimbili Art. Spoons) uthele amanzi afudumele (500 ml) futhi ukuxoxa. Lapho ingxube siyakhukhumala, ukuhlunga uhlanganise kahle ukhilimu omuncu (500 g), ushukela (100 g). Engeza lutho ingxube kusukela zomvini ezomileyo nati ne izithelo, uthola isidlo esimnandi amnandi.
Easy ukulungiselela jelly
Ekulungiseleleni kophudingi ne gelatine into ebaluleke kakhulu - ukuba bagcine olinganise Kunconywa hhayi ukuphazamisa ubuchwepheshe nokulungiselela. Uma ufaka izinto eziwuketshezi, ngaphezu kokudingekile, noma ubilise gelatin, kwakungafaneleki ukuzumeka, futhi abazange bathole jelly. Thatha isigamu ilitha ubisi, ucezu kangcono, ababili wezipuni gelatin ngaphandle amaslayidi. Gcwalisa ngayo ubisi olufudumele (250 ml) imizuzu eyishumi nanhlanu.
Lapho gelatin sikhukhumale, ukuqala ingxube kancane efudumele. Kubaluleke kakhulu: esiphezulu kungenzeka Ukushisa lokushisa kufanele kube degrees ayisishiyagalombili, engasekho, kodwa gelatin siphela kahle at okushisa aphansi. Zama ubisi ngobumnene iminwe yakho - uma kwaba hot, ungasusa ugovuze. Le nhlanganisela ke nzima ngokusebenzisa ngesihlungo.
Ingxenye ubisi (250 ml) yesibili futhi nokushisa, Ukuqedwa therein ushukela, uju, vanilla noma nesinamoni. Xhuma izingxenye ezimbili ubisi, uthele ku izitsha ezidingekayo futhi agqoke ebusuku selehlile ku esiqandisini. Ukuze ususe ifomu okuholela jelly, ukwehlisa imizuzwana embalwa in abilayo amanzi epholile.
Ubisi Jelly nge Izithelo
Gelatin dessert ngezithelo - akuyona nje okumnandi ngokumangalisayo, kodwa futhi ewusizo kakhulu. Noma yimuphi ezithambile izithelo zafanelwa kulungiselelwa lokhu dish (amapentshisi, kiwi, amabhilikosi, amawolintshi, elithambile). By the way, kubuye kube ezithakazelisayo ukuze uthole dessert ne amajikijolo. Kuze kube yimanje, izithelo okukhona elandelayo ukulingana: cherry, okusajingijolo noma sitrobheli.
Ukulungisa ubisi-izithelo jelly, kufanele ukulungiselela ngokucophelela ukuze lesi sithelo inqubo: ukuyikhipha imbewu bese ususa imisila, usike fake, amapetshisi amawolintshi Blanch kangcono isiraphu, kamuva ukuvumela ketshezi sokukhipha. Ukuze kophudingi gelatin yamukelwa kahle, ngaphambili babeka phansi izithelo. Uma inani izithelo likhulu, kubalulekile ukwandisa umthamo kanye gelatin. Isizathu salokhu siwukuthi yonke iphawundi izithelo fresh kubalulekile ukuthatha omunye eyengeziwe kanye wezipuni kwesigamu gelatin.
Ukuze izithelo babe izingqimba e dessert, siyoba ukwenza imizamo okukhulu nakakhulu. Ngesimo wathela ubisi-gelatin ingxube, khona-ke kulindeleke ukuba ugcwalise okokuqandisa ke wabeka out izithelo, bese batheleka isiqephu esisha jelly. Le nqubo ophindwe izikhathi eziningana. Fresh izithelo noma amajikijolo, nechobozekile ngendlela izithelo blender esetshenziswa ukulungiselela le dessert ne impumelelo efanayo.
Ubani uzokwenzani ukudla dessert gelatin.
Ukuze wenze lokho, kudingeka imikhiqizo:
250 igramu cream;
20 amagremu gelatin;
citric acid ingcosana;
isigamu inkomishi ushukela;
Ukuze kulungiswe okunama-kilojoule amancane dessert esimnandi, udinga ukuthatha izinyathelo ezilandelayo:
1. Gelatin ugcwalise ingxenye ingilazi yamanzi abilisiwe afudumele, ngaleyo ndlela akhuthaza ke mayelana imizuzu amabili noma amathathu.
2. omuncu ukhilimu phehla ne citric acid kanye ushukela ngokusebenzisa mixer noma inkundla.
3. Ngo-a okugeza amanzi lifudumeza gelatin esimweni ukuthi siphela ngokuphelele. Thela Ukwakheka ziyoncibilika we ophehliwe uhlanganise kahle.
4. Ungqimba ugcwele ngokuthulula nezitsha ice cream noma ukulungele ngokukhethekile kule shaper. Okulandelayo, ufafaze isithelo, ongakhetha wezokudla kungcono ukuthatha izithelo-kilojoule amaningi ezifana ubhamubhamu. Lokho bonke amnandi uswidi ulungile!
Esiyakulungisa izithelo dessert gelatin. Ukuze ukulungiselela izitsha ezinjalo wenze lokhu okulandelayo: Nanhlanu amagremu gelatin ziyoncibilika abilisiwe kodwa amanzi ostuzhennoy (50 ml). Khona-ke yini okudingeka ukupheka lo isiraphu. Isigamu inkomishi ushukela ingilazi yamanzi ukuncibilikisa ngokuphelele, ungakwazi ukwengeza juice kancane. Ngaphezu kwalokho okudingeke ukuba uhlanganise isiraphu gelatin futhi uthele izithelo juice (cishe ngo-50 ml) kuso. Ingxube kufanele kube cool. Ngaphezu kwalokho okudingeke ukuba uthathe noma izithelo kanye izithelo (mayelana 50-100 g) zifana, wawanda izinkomishi futhi uthele mass okuholela. Indishi kumele sithunyelwe efrijini amahora ambalwa. Khona-ke nawe ungadla dessert.
Ilungiselela kophudingi ne gelatin, ungakhohlwa ukuthi isikhathi solidification zohlobo ngalunye oluphilayo zakwazi uju ezahlukene, futhi uma ezinye izitsha kwanele ubambe esiqandisini ihora noma amabili, amanye kudingeka kuphole ngobusuku obubodwa ukuze bakwazi ngokuphephile ijeli kusukela isikhunta, uthathe kanye kusebenza ithebula. Yiba zokudala futhi izame, ukwenza uphudingi nge gelatin.
Broken uzwane: Izimpawu kanye Ukwelashwa Izindlela